ရင့်ကျက်သော Karhide - ကမ္ဘာ့စာအုပ်
စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို လာဖတ်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာ နှစ်မြှုပ်လိုက်ပါ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2021
Mature Karhide စာအုပ်ကို ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
ရင့်ကျက်သော Karhide- 16 (Singulars)
Mature Karhide စာအုပ်က ဘာအကြောင်းလဲ။
ရင့်ကျက်ခြင်း Karhide သည် ကျော်ကြားသော ဝတ္ထု The Left Hand of Darkness ၏ ဂြိုလ်ဂြိုလ်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသော ရယ်မောဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းက ဆယ်ကျော်သက် Sov Thade နဲ့ သူ့ရဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းကို ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါ။ Gethen တွင် လူသားများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ကျားမ ရှိသည်- ၎င်းတို့သည် ရက်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကြာ တိုတောင်းသော ဒွိလိင်အမျိုးအစားမဟုတ်သည့် အဆင့်ကို တွေ့ကြုံရပြီး၊ ထို့နောက်တွင် ၎င်းတို့၏ ကျားမကို ရွေးချယ်နိုင်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု ရက်အနည်းငယ်ဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Le Guin စာပေတွင် အကျော်ကြားဆုံး စကားစုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် The Left Hand of Darkness မှ "ဘုရင်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ" ဖြစ်သည်။ ကလေးမွေးတဲ့အခါ ပထမဆုံးမေးခွန်းက ဘာလဲ။ စာရေးသူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စုပ္ပန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကို ကျား-မ အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် ကမ္ဘာတစ်ခုကို အဆိုပြုပါသည်။ Le Guin သည် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ သဘောတူညီမှု၊ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများ၊ လိင်နှင့် ကျားမကွဲပြားမှုများ လွယ်ကူပြီး လွတ်လပ်မှုစသည့် အကြောင်းအရာများကို တင်ဆက်ထားသည်။
Mature Karhide စာအုပ်ပါ အချက်အလက်
"စာအုပ် Karhide ရင့်ကျက်ခြင်း။ de la အယ်ဒီတာအဖွဲ့ RAYO VERDE EDITORIAL ISBN နှင့် 978-84-17925-65-9 (EAN 9788417925659) မှထုတ်ဝေခဲ့သည်။ K. Le Guin၊ Ursula el en Busquets၊ Blanca. ဤစာအုပ်သည် Singulars ဖြင့် ရေးသားထားသည်။ တွင်ရရှိနိုင်သည်။ Comotto၊ Agustín ဖော်မတ်၊ အရှည်ရှိသည်။ 25 စာမကျြနှာအလေးချိန်တစ်ခု 128၊ အတိုင်းအတာ 223 x ကို 147 မီလီမီတာ။ နှင့်ရှိပါတယ် 29-11-2021 ပုံရိပ်များ။"
K. Le Guin၊ Ursula ထုတ်ဝေသည့် အခြားစာအုပ်များမှာ အဘယ်နည်း။
လြှော့ခွငျးနံပါတ် ၁ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်။
Earthsea စာအုပ်များ။ သရုပ်ဖော်ထုတ်ဝေမှု အပြည့်အစုံ- Charles Vess (Ursula K. Le Guin စာကြည့်တိုက်)
နံပါတ် ၁ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်။
ကမ္ဘာ၏အမည်မှာ သစ်တော (Hainish Cycle နံပါတ် ၅)၊
Dispossessed (Minotaur Essentials)
အမှောင်၏လက်ဝဲလက် (Minotaur Essentials)
ဇာတ်လမ်း (စာရေးဆရာ စာကြည့်တိုက်များ)၊
မွေးနေ့ပွဲ (စာရေးဆရာ စာကြည့်တိုက်များ)
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသို့ လမ်းကြောင်းလေးခု (စာရေးဆရာ စာကြည့်တိုက်များ)
Ursula K. Le Guin: Annals of the Western Shore (Loa #335): လက်ဆောင်များ / အသံများ / စွမ်းအားများ (Library of America)
The Unreal and the Real: Ursula K. Le Guin ၏ ရွေးချယ်ထားသော ဇာတ်လမ်းတိုများ (အင်္ဂလိပ်ထုတ်ဝေမှု)
RAYO VERDE EDITORIAL ၏ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်များကား အဘယ်နည်း။
ဘယ်သူမှ ရေမကူးတတ်ဘူး (Globular Rays နံပါတ် 13)
Rayo Verde (Seven Rays Metaphysical Collection No. 5)
Binti / The Night Masquerade: 19 (Singulars)
အသက်နှင့် အလွန်နီးစပ်သည်- 39 (Globular Rays)
တော်ဝင်သံပုရာပင် (Globular Rays)
အမည် ဒယ်လ်မွန်သည် ဘော့စ်- ၁၄ (အနည်းကိန်းများ)၊
မာရ်နတ်ala creu: 42 (Raigs Globulars)
L'home revoltat: 23 (Cyclogenesis)
Binti- 13 (Singulars)
Tags: အစိမ်းရောင်ရောင်ခြည် အယ်ဒီတာ
← 2021 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးတေးဂီတစာအုပ်များ | တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးစာအုပ်များ
ရောမအင်ပါယာရှိ ထိပ်တန်းစာအုပ် ၁၀ အုပ် | ဂန္တဝင် →
တိရစ္ဆာန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်များ။ ဘော့စ် mastitis
ဉာဏ်ပညာနှင့် ယှဉ်သောနှလုံးကို ငါပေး၏။
Jing Tsu မှ ပြန်လည်သုံးသပ်သော Kingdom of Characters: တရုတ်စာအရေးအသား၏ သေလုမျောပါးအတွေ့အကြုံ | စာအုပ်များ
Ramon Otero Pedrayo ဘဝ၊ အလုပ်နဲ့ အတွေး
Conscious Capitalism - လက်တွေ့ကျသော လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်သူများ
Louise Erdrich ၏ အရေးပါသော စကားစု – စာအုပ်များ | ရသစာပေ
Tom Gauld: Evil Bookstore မှာ အလုပ်အကဲဖြတ်တဲ့နေ့ - ကာတွန်း
Procreate ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပန်းချီရေးဆွဲခြင်းအတွက် စတင်သူလမ်းညွှန်
ALFAGUARA အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဘာကာနိုဗာ BEASCOA BLUME (Naturart) del Akal ထုတ်ဝေမှုများ Bromera ထုတ်ဝေမှုများ Cossetània ထုတ်ဝေမှုများ KS OmniScriptum ထုတ်ဝေမှုများ ECC ထုတ်ဝေမှုများ အထွေထွေထုတ်ဝေမှုများ Paraninfo ထုတ်ဝေမှုများ SM တည်းဖြတ်မှု SUSAETA ထုတ်ဝေမှုများ အယ်ဒီတာ ပြက္ခဒိန်တည်းဖြတ်သူ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော် Aranzadi အယ်ဒီတာ့အာဘော် Bruño Dykinson ထုတ်ဝေရေး Galaxia အယ်ဒီတာ့အာဘော် Luis Vives (Edelvives) အယ်ဒီတာ့အာဘော် အယ်ဒီတာ Planeta အယ်ဒီတာ့အာဘော် Tirant lo Blanch အယ်ဒီတာ့အာဘော် Vicents Vives လုယူခံရသည်။ မြောက်ဥက္ကလာပ အယ်ဒီတာစံ စိတ်ကူးယဉ် စီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုရန်ပုံငွေ ပြခန်း အ libros အ သို့မဟုတ်ထိုအခါ ရုပ်ပြဂြိုဟ် အားဖြင့် ဗလင်စီယာတက္ကသိုလ်၏ထုတ်ဝေမှုများ အရံ ပြန်လည်သုံးသပ်သည် စိန့်ပေါလ် SL SU una
မူပိုင်ခွင့် © ကမ္ဘာ့စာအုပ်